के छ कांग्रेसको चियापानमा 'मेन्यू' ? | News Nepal
के छ कांग्रेसको चियापानमा ‘मेन्यू’ ?
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको चियापान पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सुरु भएको छ। आगन्तुकहरूलाई शिर्ष नेताहरुले स्वागत गरिरहेका छन्। संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले दशैं,तिहार, नेपाल संवत्, छठलगायत पर्वका अवसरमा चियापानको आयोजना गरेको हो । चियापानमा चियाको साथै समोसा, जेरी र नमकिन राखिएको छ ।
कोजागत पूर्णिमाका दिन चियापान तथा शुभकामना आदानप्रदान गर्ने गरिएपनि कांग्रेस नेता चक्र बास्तोलाको निधनका कारण चियापान सार्नु परेको हो ।
सभापति शेर बहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधि, नेता विजय गच्छदारले मुख्य मञ्चमा स्वागत गरिरहेका छन् । महामन्त्री शंसाक कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव नेताहरु कृष्ण प्रसाद सिटौला, गोपालमान श्रेष्ठ, प्रकाश शरण महत, प्रकाशमान सिहं लगायतको उपस्थिति रहेको छ ।
कांग्रेसका नेता तथा प्रतिनिधि आउने क्रमम जारी छ भने अन्य व्याक्तिहरु चियापान कार्यक्रम सहभागी भइरहेका छन् । चियापानमा भारतीय राजदुत मञ्जीव सिंह पूरी सहभागी भएका छन् ।
कार्यक्रममा राजनीतिक दलका नेता, मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, सांसद, संवैधानिक निकायका प्रमुख, सरकारका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख, कूटनीतिक नियोगका प्रमुख, उद्योगपति एवम् व्यवसायी, बुद्धिजीवी, नागरिक समाजका अगुवा, मानवअधिकारकर्मी, सञ्चारगृहका प्रतिनिधि, पत्रकार, गैरआवासीय नेपालीका सङ्घ–संस्थाका पदाधिकारीलगायत विशिष्ट महानुभाव, कांग्रेसका सदस्य एवं शुभेच्छुकको सहभागिता रहने छ ।
मेयर विद्यासुन्दरको विलाैना- भीमसेन दाई उपमेयरलाई सम्झाइदिनु पर्‍यो, मलाई टेर्दै टेर्नु भएन !
काठमाडाैं। काठमााडाैं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले आफूलाई कसैले नटेरेको भन्दै दुख व्यक्त गरेका छन् । खुलामञ्चमा अतिक्रमण गरेर बनाइएका सटर...
बीआरआई सम्मेलनमा राष्ट्रपति भण्डारीले गरिन नेपाली मै सम्बोधन (पूर्णपाठसहित)
काठमाडाैं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चीनमा नेपाली भाषामा मै बिआरआइ सम्मेलनमा सम्बोधन गरेकी छन् । विभिन्न ३७ वटा मुलुकका सरकार...
एनसेलबाट तत्काल लाभकर नउठाउन सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं । ठुला करदाता कार्यालयले काटेको पत्र तत्काल कार्यान्वयनन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । ठूला करदाता कार्यालयले ७...
नेकपामा पोलिटब्युरो सदस्य को-को बन्दैछन् ? यी हुन सम्भावित अनुहार
काठमाडौं । जिल्ला एकीकरण टुंगिएलगत्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को शीर्ष नेतृत्वले पोलिटब्युरो सदस्य चयन गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ...
सत्तारुढ दल नेकपाका भातृ संगठन युवा विद्यार्थीले भने, कर नतिर्ने एनसेलको सिम बहिस्कार गराैं !
काठमाडाैं । सत्तारुढ दल नेकपाका भातृ संगठनले एनसेलका सिम कार्ड नचलाउन अपिल गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि ठूला करदाता...
काठमाडाैं महानगरमा विरोधपछि बृद्धि भएको शुल्क खारेज
काठमाडौं । निजी विद्यालयको शुल्कमा भएको वृद्धिको चाैतर्फी विरोध भएपछि काटमाडाैं महानगरपालिकाले उक्त निर्णयबाट पछि हटेको छ । महानगरलापिकाले बृद्धि...
कार्यबहाक राष्ट्रपतिको जिम्मा नन्दबहादुर पुन ‘पासाङ’लाई
काठमाडाैं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चीन भ्रमणमा निस्केपछि उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन ‘पासाङ;लाई कार्यबहाकको जिम्मा दिएकी छन् । राष्ट्रपति भण्डारी चीनबाट...
आयुक्तहरु दाहाल र पाैडेलले गरे प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको कार्यक्रम बहिस्कार, कारण यस्तो छ…
काठमाडाैं । निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा निर्वाचन आयुक्तहरु नै अनुपस्थित भएका छन् ।...